दुई साता आराम गर्दै नेकपा : विवादमाथि छलफल गर्न कसले चाहेन ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
दुई साता आराम गर्दै नेकपा : विवादमाथि छलफल गर्न कसले चाहेन ?
साउन १४ गते, २०७६ - १४:०६
काठमाडौं । करीब २ तिहाई बहुमतसहित सत्तामा आसीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विभागको नेतृत्वको सन्दर्भमा पेचिलो बहस चलेको छ । असारभित्रै पार्टी एकीकरणको सम्पूर्ण काम सकेर जनतामाझ अभियान लिएर जाने घोषणा गरेका नेकपाका दुवै अध्यक्षहरू यतिबेला सहमति जुटाउन नसकेर आत्थु-आत्थु बनेका छन् ।
सोमवार दिउँसो ३ बजेदेखि करीब २ घण्टासम्म चलेको बैठकले एकताप्रक्रियाका कामहरू टुंग्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर निष्कर्ष आयो, सधैंजस्तै । आज सहमति भएन भन्ने प्रवक्ताको भनाइ पछिल्ला केही बैठकका निष्कर्ष जस्तै बनेको थियो । सोमवार पनि उस्तै भयो ।
बरू सोमवार बसेको बैठकले १५ दिन बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । पटक-पटकको विवादले गरम बनेको नेकपा सचिवालयको बैठक १५ दिन सर्नुमा विवाद नै मुख्य कारण मानिएको छ । तर बैठक १५ दिन स्थगित गरेर अध्यक्षद्वय विदेश भ्रमणमा निस्कने भएका छन् ।
ओलीले नै चाहेनन् विवाद समाधान
सोमवारको बैठकमा सबभन्दा पेचिलो बनेको स्कूल विभागका बारेमा कुनै छलफल नै भएन । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्ला दुई बैठकहरू कुनै न कुनै कारण देखाएर स्थगित गरेका थिए । सोमवारको बैठकमा पनि ओलीले आफूलाई छलफल गर्ने मन नभएको र विवादका विषयका बारेमा कुनै छलफल नगर्ने प्रस्ताव गरे ।
‘आजको बैठकमा विवादका विषयसम्बन्धी कुनै छलफल भएन,’ सचिवालयका एक सदस्यले खुलासा गरे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठकमा विवादसम्बधी कुनै कुरामा छलफल गर्न मन नभएको भनेपछि बैठक १५ दिनका लागि स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो ।’
अध्यक्ष ओलीको यो कार्यशैली सचिवालयकै अन्य सदस्यहरूले मन पराएका छैनन् ।
खबरडबलीसँग ओलीले नै समाधान नचाहेको भन्दै ती सचिवालय सदस्यले अध्यक्षको यस्तो कार्यशैली आफूलाई मन नपरेको बताए ।
‘भन्नेबेलामा असारमा एकता टुंगिन्छ भन्दै हिंड्ने,’ उनले भने, ‘सचिवालय बैठक पटक-पटक स्थगित गराउने र बसेको बैठकमा पनि एकताप्रक्रियाका बारेमा छलफल नै गर्न नचाहने उहाँको प्रवृत्ति देखियो । यसले पार्टीलाई ठीक गर्दैन ।’
बैठक १५ दिनका लागि स्थगित भएपछि नेताहरूको अनुहार खुशी !
यसअघिका बैठक सकिएर बाहिर निस्किँदा प्राय नेताहरू निन्याउरो हुने गरेका थिए । तर सोमवारको बैठकमा प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ हसिलो पारामा प्रस्तुत भए । यसअघि बाहिर आएका सहमतिका कुराहरू सबै झुट भएको भन्दै श्रेष्ठले सचिवालय बैठकले आधिकारिकता नदिएसम्म कुनै निर्णय भएको नमानिने बताए ।
श्रेष्ठले सबै केन्द्रीय निकाय सल्लाहकार समिति, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय आयोग, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय विभाग, केन्द्रीय जनवर्गीय संगठनको एकीकरण, जिम्मेवारी निर्धारण र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको कार्यविभाजनका निम्ति रुचिका प्राथमिकताका बारेमा सोध्ने, सल्लाह गर्ने र व्यवस्थित र परिमार्जित प्रस्ताव ल्याउने गरी साउन २८ गते ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।
यससँगै यसअघि सहमति भएको भनिएका सबै विषयहरू पुनः उल्टिने खतरा बढेको छ । विशेष गरेर पेचिलो बनेको बहस स्कूल विभागमा थियो । स्कूल विभागमा स्वयं प्रवक्ता श्रेष्ठ र उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेलले आफ्नो आफ्नो दाबी अझै छाडेका छैनन् ।
सोमवारको बैठक सकिएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड पनि खुसी मुद्रामा बाहिर निस्किए । यद्यपि सञ्चारकर्मीहरूसँग उनी केही बोलेनन् ।
अध्यक्षद्वयको विदेश भ्रमण
प्रधानमन्त्री ओली आगामी साउन १८ गते सिंगापुर जाने कार्यतालिका रहेको छ । ओली आफ्नो नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापुर जाने उनको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ । उनी सिंगापुर ७ दिनसम्म रहनेछन ।
त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्ड भने भोलि नै दुवई भ्रमणमा निस्किने तय भएको छ । प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार उनी परिवारसहित दुवई भ्रमणमा जान लागेका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्ड व्यक्तिगत घुमघामका लागि दुबई जान लागेका हुन् ।
लामो समयसम्म विवादको समाधान ननिस्किएपछि नेकपाभित्र एकले अर्कालाई घोचपेच गर्ने सिलसिलासम्म शुरू भएको थियो । त्यसले अध्यक्षद्वयलाई तनाव दिएको हुनसक्ने नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । सोही तनावको व्यवस्थापन गर्न पनि नेताहरू विदेश भ्रमण जाने भएका हुन सक्ने उनको दाबी थियो ।
पटक-पटक स्थगित भएको सचिवालय बैठकको रामकहानी
गत साउन ५ गते आइतवार बसेको सचिवालय बैठकले जिल्ला इञ्चार्ज र सह-इञ्चार्जको टुंगो लगायो । तर विवादित बनेका विभागहरूको नेतृत्व टुंगो लगाउन असफल देखियो । विभागहरूको नेतृत्व पनि सोही बैठकले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर बैठक दुई दिनपछि अर्थात् ७ गते मंगलवार बोलाइयो ।
७ गते बैठक हुनुभन्दा पहिला पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीपक्षबीच छुट्टाछुट्टै र सामूहिक छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले स्कूल विभागमा आफ्नो दाबी पेश गर्ने गरी सहमति गरेर सचिवालय बैठकमा जाने तयारी गरेका थिए । तर बैठक बस्न सकेन ।
बैठकलाई पुनः ९ गते बिहीवारका लागि सारियो । तर त्यो बीचमा पनि कुनै सहमति हुन सकेन त्यसपछि १२ गतेका लागि सारियो तर त्यो बैठक पनि भोलिपल्ट बस्ने भन्दै स्थगित भयो । सोमवार बसेको बैठकमा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर कुनै सहमति हुन सकेन ।
साउन १४ गते, २०७६ - १४:०६ मा प्रकाशित
इराकमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षामा ध्यान दिन नेपालका लागि इराकी राजदुतलाई गृहमन्त्रीको आग्रह
ज्ञानेन्द्रको शतक, पारसको अलराउण्ड प्रदर्शनमा भुटानविरुद्ध नेपालको शानदार जित
उसुमा नीमा घर्तिमगरले जितिन् अर्को स्वर्ण, स्वर्णको संख्या ३० पुग्यो